Akụkọ - Gịnị kpatara ịhọrọ profaịlụ aluminom ụlọ ọrụ maka fences omenala?
Na mmepe nke Times, ọtụtụ ndị na-emepụta ngwa ọrụ mmepụta ihe na-achọ ijikwa ngwá ọrụ ha na ígwè ọrụ mgbatị na nsu, na-akpọ iche iche iji chebe ọrụ nkịtị na nchekwa nke ndị ọrụ. Kedu maka ụlọ ọrụ alumini maka ụlọ ọrụ omenala? Ọ ga-adị mma! Ma ọ dị ezigbo mma! Ebe ọ bụ na profaịlụ ụlọ ọrụ aluminom nwere echiche nke oge a, ọ dịkwa mfe ma dịkwa mfe iji, yana ngwaahịa ndị na-akwado ya dị mfe ịgbakọta. Tụkwasị na nke ahụ, profaịlụ aluminom n'onwe ya nwere ọrụ nke mgbochi na-egbochi nchara nchara dị mfe. N'okpuru anyị ga-ewebata ngere profaịlụ aluminom, ka anyị ghọta mkpokọta aluminom profaịlụ metụtara ihe na usoro nhazi, wdg.
Isi osisi nke ụlọ ọrụ aluminom na-arụ ọrụ na-abụkarị 4040 na 4080. Ọ na-abụkarị na nkuku kọlụm ahụ, n'elu, nrụgide na-ekwu ebe siri ike iji profaịlụ 4080. Usoro profaịlụ dị iche iche dị na square, ngwaahịa ndị a gwụchara na-ekpo ọkụ, elu ya dị mma. Karịsịa mgbe ụlọ ọrụ 4.0 gasịrị, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ụlọ ọrụ mmepụta ihe chọrọ mkpa profaịlụ aluminom iji hụ nchekwa nke ebe obibi.
Ojiji nke ulo oru aluminium profaịlụ nhazi usoro nhazi, nkwekorita di oke adaba, akuku njikọ ya raara onwe ya nye ngwa. Naanị anyị kwesịrị ịhazi dịka eserese ndị ahụ emebere, oghere ọkpọ na wires mgbata, nke kachasị adaba maka mgbakọ. Ala ngere bụkwa ụkwụ pụrụ iche, enwere ike idozi ma ọ bụ megharịa. Ọ dị mfe karị ijikọ na ngwa ndị pụrụ iche.
Tụkwasị na nke ahụ, ahaziri ụlọ ọrụ aluminom dị iche iche na-enye aka nhọrọ, na-abụkarị acrylic, ọkụ nchedo, ọkụ na-ere ọkụ, plexiglass na na. Ndị ahịa ndị ọzọ ga - ahọrọ 40 site na 40 okporo ojii. Mgbe ị na-eji ihe inyeaka ndị a, ọ dị mkpa ka ị tinye ha n'ime oghere edebere maka profaịlụ, nke dị mma maka njikọ na-enweghị ntụpọ.